musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Pegasus Airlines: Net Zero Carbon Emissions na2050
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Sustainability News • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau
Pegasus Airlines: Net Zero Carbon Emissions na2050.
Pegasus anojoinha nendege dzinotungamira pasirese mukugadzirisa kuzadzisa "Net Zero Carbon Emissions na2050" yakabvumidzwa kuInternational Air Transport Association's (IATA) 77th Annual General Meeting.
Nekuzvipira uku, kunofambirana nechinangwa cheChibvumirano cheParis chekudziya kwepasirese kusapfuure 1.5°C, chinangwa ndechekuzadzikisa kuburitswa kwekabhoni net zero panosvika 2050 uye kuita kuti kubhururuka kuenderere mberi.
Pegasus Airlines inoita basa rekutarisa, rekubika uye kuvandudza mukati mehurongwa hwakatarwa nemirairo yenyika neyekunze sechikamu chekuyedza kudzivirira kwemamiriro ekunze uye kurwisa kudziya kwepasirese.
Pegasus Airlines icharamba ichishanda nesimba kuti ive iyo yakasvibira ndege muTurkey uye mudunhu
Kugadzirisa mashandiro ayo uye zviitiko pasi pe "stainable environment" maitiro, Pegasus Airlines akabatana nendege dzinotungamira pasi rose mukugadzirisa kuzadzisa "Net Zero Carbon Emissions na2050" iyo yakatenderwa kuInternational Air Transport Association's (IATA) 77th Annual General Meeting. Nekuzvipira uku, kunofambirana nechinangwa cheChibvumirano cheParis chekudziya kwepasirese kusapfuure 1.5°C, chinangwa ndechekuzadzikisa kuburitswa kwekabhoni net zero panosvika 2050 uye kuita kuti kubhururuka kuenderere mberi.
Vachitaura nezvechiziviso ichi, Mehmet T. Nane, CEO wePegasus Airlines, akati: “Sezvo. Pegasus Airlines, kuderedza migumisiro yakaipa pane zvakatipoteredza uye kudzivirira kusvibiswa mukati mehutano hwehupenyu hwehupenyu chikamu chinokosha chemitemo yedu yezvakatipoteredza. Isu tinoitawo basa rekutarisa, rekuzivisa uye kuvandudza mukati mehurongwa hwakatarwa nemirairo yenyika uye yepasirese sechikamu chekuyedza kudzivirira kwemamiriro ekunze uye kurwisa kudziya kwepasirese. Uye zvino, rukudzo rwakakura kuita kuzvipira uku kuIATA's "Net Zero Carbon Emissions by 2050" resolution pamwe nendege dzinotungamira pasirese. Mehmet T. Nane akaenderera mberi achiti: “Nekuzvipira uku, tinotsigira nekuzvipira kuchinangwa chekuwana kuburitsa zero zero carbon emissions panosvika 2050 nekushandisa mikana yakapihwa bazi redu kuburikidza nekufambira mberi kwehunyanzvi, nerutsigiro kubva kubazi rezvemagetsi uye nekubatana nevane . Mukati megadziriro yemaitiro edu e "stainable environment", ticharamba tichishanda pakuchinja kwezvikepe zvedu uye mapurojekiti ekubvisa kabhoni munguva yepakati; uye nekufamba kwenguva, tarisa kushandiswa kweSustainable Aviation Fuels (SAFs), ndege itsva yetekinoroji uye matekinoroji ekutora kabhoni. Ticharamba tichishanda nesimba kuti tive iyo ndege yakasvibira mukati Teki uye munharaunda yedu.”
Sechikamu chekuedza kwayo kurwisa shanduko yemamiriro ekunze, Pegasus Airlines inoshanda mukutevedzera zvizere mirau yechikamu yakatsanangurwa nevakuru venyika nevekunze mukati mehurongwa hwekudzikisa kuburitswa kwegasi rinopisa iro rakakosha kune chikamu chendege, uye rinoongorora gore rega rega, kuona uye kuzivisa kuburitsa kwayo kabhoni zvinoenderana nemirairo yenyika. Kuisa kukosha pakudzikisa kuburitswa kwekabhoni panobva, Pegasus inoshandisa kwakasiyana mashandiro ekuvandudza kuita izvi sekushandura kune vadiki zvikepe, kutenga yakaderera emission ndege, kuderedza huremu hwendege uye kugadzirisa nzira. Nechisungo chekuzadzisa "Net Zero Carbon Emissions na2050", uye pasi pemutemo wayo wekujeka, Pegasus Airlines yatanga kuburitsa kabhoni yayo pamwedzi wega wega pawebhusaiti yehukama hwevashambadziri, kutanga neshumo yaGumiguru 2021. Kuedza kwese uku kuri kurongwa zvakare pamwe chete nehurongwa hwekutonga kwePegasus mumunda weSustainability (ESG - Environmental, Social, and Corporate) uye kutsigira zvazvinobuda.